2016 | အ င်္လ ကာ ည
Failure is just one step towards success. Keep Goi...
2:12 AM | Labels: မွေးနေ့ဆုတောင်း
Today is my 31 birthday.
> အောင်မြင်ချင်တဲ့သူက အောင်မြင်နေသူကို အားကျ အတုယူရမယ်
> မုဒိတာပွား ဝမ်းမြောက်ရမယ်
> မနာလိုစိတ် မဖြစ်ရဘူး , သူထံက နည်းခံရမယ်
> အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ် ပြုရမယ်
> သူများထက် သာတဲ့ ဇွဲ ရှိရမယ်
> ဘယ်လို အခက်အခဲနဲ့တွေ့တွေ့ နောက်မတွန့်ရဘူး
> ရိုးသားမှု ရှိရမယ်
6:49 PM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
Alin Karr Nya
9:23 AM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
8:35 AM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
အောက်ပါ ပညာ များကို သင်တတ်ပြီလား?
4. တစ်ပါးသူ ကျော်ခွသွားတာတွေကို သည်းညည်းခံနိုင်ပြီလား
6. သူတစ်ပါးတာဝန်လွဲပြောင်းပြီး ကိုယ့်တာဝန်အဖြစ် ခေါင်းခံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီလား
7. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု့ ရှိပြီ့လား
9. မိသားစုဆီမှ လက်ဖြန့်တောင်းနေရတုန်းလား
10. အုပ်ထိန်းသူမိသားစုသြဇာခံအဖြစ် သေဆိုသေ အလုပ်ထွက်ဆိုထွက် ဒါလုပ်ဆိုလုပ် အဖြစ် ရပ်တည်နေရဆဲလား
11. ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ပြီလား
12. ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ တာဝန်ယူနိုင်ပြီလား
13. ဆုံးဖြတ်ချက်လွဲမှုကြောင့် ကိုယ်တာဝန်ကိုယ် ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီလား??? မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တစ်ချို့အချက်အလက်တွေကျန်ရှိနေဦးမှာပါ - သို့သော်ဘဝတစ်ခုရပ်တည်ဖို့အတွက်အထက်ပါအချက်အလက်နဲ့ ကင်းလွတ်ချင်မှကင်းလွတ်ပါလိမ့်မယ့် - မိမိဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက် မိမိရှေ့ရေးအတွက် မိမိဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက် မိဘ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်း တစ်သက်လုံး တာဝန်မယူနိုင်ဘူးလေ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကိုယ့်မိသားစုကို ကိုယ်ပဲတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာ- ဘယ်သူလာကူညီနိုင်မလဲ သင် သိပါသလား- ??? သင့်ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက် -အရည်အချင်း-ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ သင့်ကြိုးစားမှုပေါမှုတည်သည်-
14. ဒါကိုကြည့်ပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့မိဘက အားပေးမယ် ရှုံချမယ် ကဲ့ရဲ့မယ် အတင်းပြောမယ် လိုသည်ရှိမယ် မလိုသည်ရှိမယ် မနာလိုဝန်တို မုန်းထား တွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာ မလွဲဧကန်ပါ-